मिडियामा यसरी छाए बलात्कार आरोपी कृष्णबहादुर महरा ! (भिडियो र कार्टुन फिचर) spacekhabar
आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार आरोप लागेका प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले मिडियामा हटकेक छन् ।
महराले असोज १२ गते रोशनीमाथि बलात्कार गरेको भन्दै हाम्रा कुरा डटकमले असोज १४ गते खुलासा गरेको थियो । सो खुलासापछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले महराको सांसद पदसमेत निलम्बनमा परेको छ ।
थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका महरालाई थप अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले हिजो (मंगलबार) अदालतमा उपस्थित गरायो । अदालतले पनि थप अनुसन्धान गर भन्दै प्रहरीलाई अझै तीन दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।
असोज १९ मा सभामुखको सरकारी निवासबाटै महरालाई प्रहरीले नियन्त्रण लिई अनुसन्धान थालिरहेको छ । पक्राउ यता दसैंसँगै अन्य विविध बिदाका कारण उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सकिएको थिएन । तसर्थ प्रहरीले हिजो (मंगलबार) अदालतमा उपस्थित गराई तीन दिनका लागि म्याद थप गराएको हो ।
असोज १३ गते बेलुका यो काण्ड बाहिरिएसँगै महरामाथि ट्रोल, कार्टुन तथा भिडियोहरु धमाधम बन्न थाले । त्यसयता महराले स्वदेशमा मात्र नभई विदेशी मिडियामा पनि राम्रै स्थान पनि पाए । हेरौं महरामाथि बनेका कार्टुन, भिडियो अनि ट्रोल फिचर ।
कान्तिपुर दैनिकका लागि अविन श्रेष्ठले बनाएको कार्टुन ।
यो कार्टुन पनि कान्तिपुर दैनिकका लागि अविनले नै बनाएका हुन् ।
यो कार्टुन भने नेपाल म्यागजिनका लागि रवीन्द्रले बनाएका हुन् ।
यो कार्टुन पनि नेपाल म्यागजिनका लागि रवीन्द्रले नै बनाएका हुन् ।
यो समाचार भने भारतीय पत्रिका अमर उजालाले प्रकाशन गरेको हो । यसमा महरालाई महराज बनाइएको छ । धन्न महाराज नै बनाइदिनए छ । उसो त भारत मात्र होइन अन्य मुलुकका सञ्चारमाध्यममा पनि महरा काण्डको समाचार राम्रैसँग सम्प्रेषण भएका छन् ।
यो कार्टुन भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकका कार्टुनिस्टले बनाएका हुन् ।
यो कार्टुन भने सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको छ । यो कार्टुनमा रविन नाम लेखिएको छ । सायद उहाँले नै बनाएको हुनुपर्छ ।
यो समाचार भने दी न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशन भएको हो ।
धन्यवाद यहाँहरुलाई । यहाँहरुको केही जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला । यसमुनि महरासँग सम्बन्धित केही समाचारका शीर्षकहरु राखेका छौं । सायद तपाईंहरुले पढ्न छुटाउनुभएको हुन सक्छ र अन्तिममा एउटा भिडियो पनि राखेका छौं । फरक प्रसंगमा नाचेका महराको भिडियोलाई उनको वास्तविकतासँग मेल खाने गीत राखेर बनाइएको रहेछ । जुन हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै लिएका हौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको हेडलाइनमा महरा
महरा काण्ड सार्बजनिक गर्ने पत्रकारलाई सुरक्षा ‘थ्रेट’
महरा प्रकरणमा अधिकारकर्मी लिलि थापाको मागः प्रहरीले मात्रै अनुसन्धान गरेर पुग्दैन
महरा प्रकरण छानबीनकाे माग गर्दै भट्टराईले भने– सत्ताशक्तिको बलमा दबाएर फासफुस गर्न मिल्दैन
महरा प्रकरणः प्रधानमन्त्रीलाई कसले दिएको थियो सीसीटीभी फुटेज ?
महरा प्रकरण : 'बलात्कार प्रमाण देखिए मुद्दा मोड्न मिल्छ'
अब हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालबाटै लिइएको यो भिडियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २९, २०७६, ११:३४:००